Maka onye nnabata | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Maka onye nnabata
Kedu ka esi eji boric acid maka ịsacha anya?
Boric acid bụ ihe na-arụsi ọrụ ike n'ụdị nkuchi crystalline. Ọ na-agbaze nke ọma na mmiri ọ bụla. A na-ejikarị ọgwụ a eme ihe na nkà mmụta ọgwụ ọdịnala maka iji ọgwụgwọ dị iche iche nke akụkụ ahụ nke ọhụụ. A na-eji ọgwụ a eme ihe ogologo oge maka disinfection. Ma ọ dị mkpa iji nlezianya jiri boric acid, n'ihi na ndị dọkịta achọpụtara na ọ bụghị ihe ọhụụ site na mmetụta nke ngwọta a.
Na-elekọta ahụike gị: jiri mpịakọta acid boric acid maka ntị
A na-emezi ọgwụgwọ nke ọrịa ndị ntị na ngwugwu mmiri boric acid n'oge niile. A na-eji otu mpikota onu na acid boric tụnyere physiotherapy, mana mpempe akwụkwọ nwere ike ịnwetakwa, ọ pụkwara itinye ya n'ọrụ n'enweghị ọgwụ dọkịta. Ọzọ, anyị ga-agwa gị ụdị uwe ejizi ahụike, otu esi etinye ha n'ọrụ n'ụzọ ziri ezi, uru na ọghọm nke usoro ahụ.
Kedu ihe ngwọta mmanya mmanya boric acid maka? Ngwa na ntuziaka maka nkwadebe nke pasent 3
A na-eji ọgwụ a eme ihe ugbu a ma ndị mmadụ ma ọgwụgwọ ọdịnala, n'ihi ihe ndị na-agwọ ọrịa antiseptic. Boric acid bụ ihe ngwọta na ethanol (70%), ọnyà nke nwere ike ịdị iche n'etiti 0.6 - 4.5%. Odighi. Ihe kachasị mma nke ọgwụ a bụ ọnụahịa kachasị mma na iji.
Ihe ngwọta dị mfe: ọ ga-ekwe omume ịdọrọ boric acid n'ime ntị? Nkwekọrịta na ogologo oge ọgwụgwọ
Boric acid bụ antiseptic magburu onwe ya. N'ihe ntanye nke ntị maka ịmalite, ị nwere ike iji ihe ngwọta mmanya nke acid boric - pasent 3. Ọ dịghị mkpa iji nyocha onwe gị, ma jide n'aka na ị gakwuru dọkịta maka nyocha ọhụụ ziri ezi. Ọrịa Catarrhal nke ntị na-esonyere nnukwu ihe mgbu nke siri ike idi.
A na-eji acid (orthoboric) mee ihe n'ịgwọ ọrịa dịka antiseptic. Ọ bụ nke na-adịghị ike acid, na-enweghị uto na isi ísì, na-adịghị mma soluble na mmiri. Anyị maara ya dịka mmanya na-aba n'anya - ihe ngwọta ethanol 70% na ọdịnaya acid boric acid nke 0.5-3%. Maka ọgwụgwọ acne na acne, ọ bụghị naanị ihe ngwọta mmanya ka a na-eji mee ihe, kamakwa mmanụ mmanu, yana "ndị na-ekwu okwu" dị iche iche - nkwụsịtụ, nke nwere ọ bụghị nanị ọgbụgba acid, kamakwa ọgwụ ndị ọzọ na-agwọ anụ ahụ.
Ihe ndị dị mkpa gbasara boric acid na mmanya nke otu aha - ọ bụ otu ihe ahụ ma ọ bụ na ọ bụghị? Ngwa ngwa
Ọ na-esiri ọtụtụ ndị ike ịmata ọdịiche dị n'agbata atọ nwere ihe ndị yiri ya - acid boric, mmanya mmanya, na salicylic acid. Na nkà mmụta ọgwụ, a na-eji ọgwụ ọjọọ dị ka mmanya na-aba n'anya na-eji ya eme ihe. Ọ bụ ihe ngwọta na ethanol (70%) nke acid boric, bụ nke nwere ike ịdaba na 0,5-5%.
Enwere uru benic acid maka nhụjuanya ntị? Ntuziaka iji mee ihe na ọgwụgwọ otitis
Ọtụtụ mgbe, ndị dọkịta na-arịa ọrịa ntị na-edeba mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ na-egbu mmiri na ntị. N'ọrịa nke ntị, boric acid bụ onye inyeaka dị mkpa nke nwere ezigbo ihe antiseptic. A na eji usoro a eme ihe na nkà mmụta ọgwụ ogologo oge ma nwee akụkụ dị mma. Otitis bụ usoro mkpali nke na-eme n'ime ntị.
Mmetụta dị aṅaa ka acid acid nwere ma ọ bụrụ na ọ na-abanye gị ntị n'oge ime?
Nwanyị nke nọ n'ọkwá mara mma nwere ike ịnagide nsogbu ahụ ike. Ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe niile na-achọsi ike ịrịa ọrịa na ịṅụ ọgwụ mgbe ị dị ime, ọ dị mkpa iji chebe onwe gị ka ọ bụrụ ụdị ọrịa ọ bụla. Isiokwu a ga-emeso ọgwụgwọ nke otitis nke ndị inyom dị ime na acid boric. O yiri ka ọtụtụ iri afọ a na-enye ọgwụgwọ maka ọnyá nke ọrịa ọgbụgba, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-adịghị njọ, n'ihi na a na-eji ya na ọgwụgwọ otitis na ụmụaka, ma ọ bụghị.
3 ụzọ dị irè isi na-emeso ụmụaka nwere acid boric. Ntuziaka maka iji antiseptic
Ndị nne ochie anyị na-eji Boric acid agwọ ọrịa dị iche iche. Na nkà mmụta sayensị nke oge a, ndị ọkà mmụta ọgwụ, ndị ọkà mmụta ọgwụ na ndị ọkachamara na-eji ya eme ihe. A na-ejikarị ya eme ihe na nti nke ntị. Dị ka a na-achị, ndị okenye na-emeso boric acid. Maka ụmụ, enwere echiche dị iche na nke a.
Olee otu esi eme ka ejiji na mmiri ogugu iji mee ihe na nti, otu esi esi etinye ya na ole ka edebe ya n'igwe nti?
A na-eji Boric acid na ntị mee ihe n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ ọ bụla, ọ bụrụ na onye si n'ezinụlọ nwere nsogbu na ntị. Iji mee ọgwụgwọ nke ntị na-arịa ọrịa n'abalị, ọ dị mkpa itinye turndochki n'ọrụ - ndị a bụ swabs owu na-etinye na mmanya mmanya. Nke a bụ ụzọ dị mfe ma dị mma. Ojiji nke turic acid boron acid bụ otu n'ime usoro kachasị esi agwọ ọrịa ndị ntị.
Hawthorn na-ewu ewu n'etiti ndị na-anụ ọkụ n'obi banyere nkà mmụta ọgwụ. Hawthorn bụ ezi isi iyi nke vitamin bara uru, ya mere ọ dị mkpa maka ịma mma gị na ike gị. Hawthorn bụ berry dị ebube, nke na-atọ ụtọ nke ọma. Ma ndi okenye na umuaka na-eri ya na obi uto. A pụrụ ịmepụta Hawthorn dika ala ya, ọ ga-amị mkpụrụ, na n'ime ọhịa.
Esi esi akpo hawthorn na ulo n'ime oven: ole oge na mgbe okpomọkụ?
Na elu okpomọkụ hawthorn, osisi shrub, na-amalite ọrụ okooko osisi ya, ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ya niile ọ bụghị nanị na nri kama maka ọgwụgwọ. Fried flowers, leaves and berries brewed with tii, eji na nkwadebe nke compotes na decoctions. A na - ejikarị ya eme ihe maka ịchọ mma, dịka ọmụmaatụ, dị ka akpụkpọ anụ.
Ụzọ iji chekwaa garlic n'oge oyi n'ụlọ
Osisi garlic bụ ihe ọkụkụ dị egwu maka nchekwa, karịsịa n'ụlọ. Kedu ụzọ ndị nne na nna na-esi edozi ya n'ihu afọ ọhụrụ ahụ? Kedu esi edozi garlic bulbs maka nchekwa nchekwa ogologo oge, oleekwa ọnọdụ a chọrọ maka oyi garlic iji mee ka ọ dị ọhụrụ ma ghara ịcha?
Kedu ka esi esi kpoo garlic na ulo n'ulo ikuku, na oven na elekota eletriki?
Garlic bụ ihe oriri nke nwere ike ịkpọ ya ngwaahịa zuru ụwa ọnụ bụ akụkụ nke ụdị efere dịgasị iche iche. A na - ejikarị galik eme ihe na nri, ma a na - achọta ya mgbe ọ bụla a na - achicha ya. Osisi a kụrụ akpụ dị mfe iji chekwaa ma dị kwa n'afọ.
Kedu otu esi echekwa pears ohuru maka oyi n'oge obibi?
Mgbụsị akwụkwọ na-eme nri na-enye nri dị ukwuu nke pears? Ntube ndi di mkpa dika nkpuru nke nkpuru a mikotara na pears na nkpuru a mikpuru akpo abiala, ma enwere otutu nkpuru? Ọ ga-ekwe omume ịnọgide na-eri mkpụrụ ọhụrụ n'ụlọ? Kedu na otu esi echekwa pears? Ogologo oge ole? Ọ ga-aba uru ọ bụla n'ime ha?
Enwere ike ịchekwa garlic na okpuru ulo na okpuru ulo n'oge oyi tupu owuwe ihe ubi ohuru?
Idebe garlic na okpuru ulo a na-ewere ụzọ kachasị mma. Ọ bụrụ na okpuru ulo dị njikere, ọ dịghị ihe ga-egbochi galik ịgha ụgha ruo mgbe mmiri, na mgbe ụfọdụ ruo mgbe owuwe ihe ubi ọhụrụ. Ihe isi ike nwere ike ime n'ihi nkwenye na ọnọdụ ọ bụla dị mkpa. Otú ọ dị, onye na-elekọta ubi nwere ụzọ na ụzọ niile ị nwere ike isi mepụta ọnọdụ dị mma maka ịchekwa garlic.
Họrọ nke kacha mma, otu esi echekwa garlic maka oyi n'oge obibi: n'ime friji ma ọ bụ na ụlọ akụ?
Garlic bụ nnukwu mgbakwunye na efere kachasị amasị gị. Ọ na-enye uto osere na disinfect nri. A na-eji ya na nri na ọgwụgwọ ọdịnala, ọ dị mkpa na kichin ọ bụla ma ọ dị mma na galik nwere ezigbo nchekwa. A na echekwa ya ruo ogologo oge ma ghara ịda njọ, ma ọ bụ naanị n'okpuru ọnọdụ niile. N'isiokwu a anyị ga-ekwu banyere otu esi echekwa garlic n'ụlọ n'ụlọ?
Na-echekwa mkpụrụ osisi maka oyi: otu esi egbutu pears dị na anyanwụ?
Mkpụrụ osisi a mịrị amị bụ ụzọ dị mma iji chekwaa ụtọ ya na ihe ndị bara uru ruo ogologo oge, nke a bụkwa eziokwu karịsịa maka anyị - ọ gaghị esiri ike ịmị mkpụrụ osisi okpomọkụ n'oge oyi na oyi. Ị nwere ike ịmepụta ihe ndị dị mma, decoctions na infusions site na mkpụrụ osisi mịrị amị, tinye ha na efere dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, pies na, n'ezie, na-eji na-enweghị ihe niile na dị ka nke ahụ.
Vitamin niile n'afọ: esi echekwa pears maka oyi n'ime okpuru ulo?
Mgbụsị akwụkwọ bụ oge owuwe ihe ubi. Ndị niile na-eto ndụ n'oge okpomọkụ nwere mmasị na otu esi echekwa mkpụrụ nke mmiri ha na ọkọchị na-arụ ọrụ ogologo oge o kwere mee. Ọ na-esiri m ike ịnọgide na-enwe ụdị ụtọ dị ụtọ ma na-atọ ụtọ, mana mkpụrụ osisi na-adịghị mma dị ka pears. Ọ bụ ezie na a na-echekwa pears ka njọ karịa apụl, mana, ọ ga-ekwe omume ichebe ha maka oriri oyi.